Posted by Tranquillus | Agoosto 24, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Dhammaadka iimaylka: 5 qaacido edeb leh oo ay tahay in la mamnuuco kharash kasta
Dhammaadka iimaylka xirfadlaha ah wuxuu noqon karaa mid feejigan oo soo jiidasho leh iyada oo aan dhaafin kanons-ka lagu aasaasay farshaxanka waraaqaha. Talaabadani waa mid ka mid ah waxyaabaha aan la dayacin, sababtoo ah waxay ku xiran tahay tallaabada aad ka qaadi doonto emailkaaga. Doorashada dhamaadka saxda ah ee jumlada iimaylka waxay u baahan tahay in la barto kuwa ay tahay in laga fogaado kharash kasta. Maamule, ganacsade ama shaqaale, waxaad shaki la'aan u baahan tahay inaad hagaajiso farshaxankaaga waraaqo. Maqaalkan, ka hel 5 qaacido oo asluub ​​leh oo aan mar dambe ka muuqan iimaylkaaga.
"Ha ka waaban inaad ...": Weedh akhlaaq leh
Weedha asluubta leh waa mid aan la martiqaadin maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa xishood gaar ah. Intaas ka sokow, "Ha ka waaban inaad ..." waa a ereyo taban. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa, fikirka khabiirada luqadaha qaarkood, dhiirrigelin yar oo ficil. Waxaa ka sii daran, waxay ku kalliftaa ficil dambe, oo lid ku ah waxa aan rajaynayno.
Qaacidada ugu habboon ayaa ah tan: "Ogow inaad i soo gaari karto ..." ama "I soo wac haddii loo baahdo". Sida iska cad, sidaad u fahmi lahayd, lama huraanka weli waa caan.
"Waxaan rajaynayaa in ..." ama "Anigoo rajaynaya in ...": Qaaciddadu sidoo kale waa dareen -yaqaan
Erayada khubaro dhowr ah oo ku jira xeerka isgaarsiinta shirkadaha, “maanta wixii ka dambeeya ma rajaynayno wax shaqo ah”. Halkii, waa inaad doorataa muujinta ad -adaygga leh ee asluubta leh, sida "waan jeclaan lahaa".
"Adigoo ku sii jiraya ...": Ixtiraam aad u hooseeya
Qaaciddan asluubta leh waxaa lagu gartaa is -dhiibid xad -dhaaf ah. Runtii, qofka leh “Ixtiraam” micnaheedu maahan “Soo -gudbin” ama “Cachotterie”. Waayo -aragnimadu waxay muujisay in samaynta noocan oo kale ahi ay saamayn aad u yar ku leedahay la -taliyahaaga.
READ Xasuusinta muuqaalka cybercourtoisie
Tusaale ahaan, waxaad dhihi kartaa: "waan ku dhageysanayaa" ama "waxaan sugayaa jawaabtaada". Waa tibaaxaha edebta leh ee soo jiidashada leh.
"Waad ku mahadsan tahay ..." ama "Horta waad ku mahadsan tahay sida aad iigu soo jawaabtay ...": Qaaciddada ayaa aad ugu kalsoon
Halkaan mar kale, sameyntaani waxay muujisay xadkeeda. Waxay tilmaamaysaa kalsooni xad -dhaaf ah. Waxaa intaa dheer, caadadu waa inaan u mahadnaqno falalkii hore.
Waxaad tusaale ahaan dhihi kartaa: "Waxaan ku xisaabtamayaa jawaabtaada sida ugu habboon ..." ama si toos ah u sheeg waxaad ka filayso weriyahaaga.
"Fadlan…": Halkii erey culus
Weedha asluubta leh “Waxaan kaa baryayaa inaad raalli ka noqoto” waxay leedahay dhammaan hal -ku -dhigyada maamulka. Marka laga reebo in emayl xirfadeed, isbeddelku waa xawaare. Ma aha inaan ku samayno qaacidooyin maamul oo aad u qallafsan.
Laakiin qaacidooyinkee bay tahay in markaa la doorbido?
Qaar ka mid ah tibaaxaha edebta leh ee la isticmaalo
Waxaa jira qaacidooyin badan oo edeb leh oo ay tahay in la doorbido. Mid baa ka soo qaadan kara qaacidooyinka noocaan ah: "Maalin wanaagsan", "Salaan sharaf leh", "Salaan daacad ah", "Salaan qumman" ama xitaa "Xusuusteyda ugu fiican".
Dooro dhammaadka saxda ah ee jumladda emaylka, laakiin sidee baad u mareysaa? Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
horeDa'dee ayaad ku baran kartaa luqad shisheeye? Waayeelka ayaa marag fura!
socdaQaaciidooyinka edeb leh ee dhammaadka iimaylka ku jira xaalad gaar ah